Soo-saaraha Heerkulka Heer-kuliyaha Shiinaha
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka dareeraha > Dareeraha heerkulka Stator
Dabeylaha dareeraha heerkulka stator (TW2010Pt100-100-2-3104 / 00F200 / X2) wuxuu leeyahay kor u kac heer kulka yar iyo cabirka heerkulka lagu kalsoonaan karo.
Heerkulka istaandarka RTD
Caabbinta kuleylka ee gundhigga ah ee loo isticmaalo matoorka waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro heerkulka stator ee mootada weyn, dhexdhexaad iyo yar (matoor, mooto).
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Dareeraha heerkulka Stator soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Dareeraha heerkulka Stator kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.